कसरि खानेकुराहरुलाई वर्षौंसम्म कुहिन, सड्न र नष्ट हुनबाट जोगाउने ? यस्ता छन् तरिकाहरु: - VOICE OF NEPAL TV
कसरि खानेकुराहरुलाई वर्षौंसम्म कुहिन, सड्न र नष्ट हुनबाट जोगाउने ? यस्ता छन् तरिकाहरु:
१६ असार २०७८, बुधबार १४:१०
धेरैजसो खानेकुरा लामो समयसम्म राखेर एवं भण्डारण गरेर खान सकिंदैन । किनभने निश्चित समयपछि खानेकुरा कुहिने, सड्ने प्रक्रियामा जान्छ । त्यसैले हामीले आफ्नो खाद्य भण्डारमा धेरै किसिमका खानेकुरा जगेर्ना गर्न सकिरहेका हुँदैनौं ।